admin, Author at Nepali in Australia
काठमाडौं, ६ साउन – सरकारले आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको क्याफिनयुक्त रेडबुल बिक्री गरेको अभियोगमा प्रहरीले चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा छापा मार्दा बिक्री गरेको पाइएपछि चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ गोङ्गबु बस्ने ३६ वर्षीय राजु पौडेल, बबरमहल बस्ने ४४ वर्षीय रबिनराज श्रेष्ठ, निलोपुल बस्ने ३१ वर्षीय […]
July 21, 2021 adminLeaveaComment on हजार वर्ष यताकै बढी वर्षा भएपछि कस्तो भयो चीनमा ? हेर्नुस् भिडियो
एजेन्सी । नेपालमा पनि अहिले अत्याधिक वर्षाले वर्षायाम लाग्नु अघि नै बाढी पहिरोले धनजनको क्षती गरेको छ । तर चीनमा भने हजार वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी वर्षा भएको छ । चीनको हेनान प्रान्तमा हजार वर्ष यताकै वढी वर्षा भएको हो । जसका कारण त्यहाँको जनजिवन अस्तब्यस्त भएको छ । शुक्रबारदेखि मंगलबारसम्म लगातार वर्षा भएको छ […]
काठमाडौं। नेपालमा नै पहिलो पटक क्यान्सरविरुद्धको औषधि उत्पादन शुरु गरिएको छ । टिजिङ्ग फर्मा प्राइभेट लिमिटेडले पहिलो पटक क्यान्सरविरुद्धको औषधि उत्पादन शुरु गरेको हो । नेपालमा क्यान्सरको औषधि भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने गर्दथ्यो । यहाँ आयोजित कार्यक्रममा आज टिजिङ्गका कार्यकारी निर्देशक शैलेश वैद्यले क्यान्सरविरुद्धको औषधिको उत्पादन शुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले औषधि व्यवस्था विभागसँग […]
अमेरिकाको ओरेगनमा समुन्द्री किनारामा १ सय पाउण्डको दुर्लभ प्रकारको विशाल रंगिन माछा फेला परेको छ । मुनफिसका रुपमा समेत चिनिने ओपाह नामको उक्त माछा ओरेगनको सनसेट बिचमा भेटिएको हो । साढे ३ फुट लामो उक्त माछा सिसाइड अक्वारियमले राखेको छ । माछाको पेटमा चाँदी रंगमाथि गुलावी रंग पोतिएको छ भने सेतो भागका थोपाहरु छन् । […]
भोलिदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको तलब यति धेर को दरले बडने/ काठमाडौं। आजबाट मासिक २ हजार रुपैयाँले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छ।पुरा हेर्नुहोस भिडियो सहित) यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन १ गतेदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार वृद्धि गर्ने बजेटमा प्रस्तुत गरेको थियो। यससँगै आजबाट सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको हो। निवर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले […]
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ७१९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्र मण पुष्टि भएको छ ।काठमाडौंमा ५३१, ललितपुरमा १४७ र भक्तपुरमा ४१ जना कोरोना संक्र मित थपिएकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएका छन् । यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो सोमबार ४७४ जनामा संक्र मण पुष्टि भएको थियो ।मन्त्रालयका अनुसार यससँगै देशभर कोरोना संक्र मितको कुल संख्या […]
July 21, 2021 adminLeaveaComment on फल खान’कै लागि रुख’को टुप्पोमा पुग्छन् यी जातका बाख्रा (भिडियो सहित)
बाँदर रुखमा चढेको त हामीले देखेका नै छौँ । तर के तपाईले बाख्रा पनि बाँदर’झैँ रुखमा चढेको देख्नुभ’एको छ ? देख्ने त कुरै छो’डौँ सुुन्नु पनि भएको छैन होला । सामान्यतया हामीले पाले’का बाख्रा त्यसरी रुख चढ्न सक्दैनन् । तर अफ्रिकी देश मोरक्को’मा पाइने एउटा विशेष जातको बाख्रा भने बाँदरझैँ रुखमा चढ्ने गर्दछ । रुखमा […]
July 21, 2021 adminLeaveaComment on प्रचण्डको सुरक्षामा किन बढाइयो सुरक्षाकर्मी ?